“ရန်ကုန်မြို့ ပိတောက်ပွင့်တဲ့နေ့ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » “ရန်ကုန်မြို့ ပိတောက်ပွင့်တဲ့နေ့ “	7
“ရန်ကုန်မြို့ ပိတောက်ပွင့်တဲ့နေ့ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 24, 2016 in Poetry |7comments
” ဟော ပိတောက်တွေပွင့်ပြန်ပါပြီကွယ် ”
Thint Aye Yeik says: ပိတောက်တွေ တစ်ပင်လုံး ဝါထိန်နေအောင် ပွင့်တာမြင်ရင်….
အပင်ပေါ်တက် အကောင်းဆုံး အခက်လေးတွေကို ချိုးပြီး… ကောင်မလေးတစ်ယောက်ယောက်ကို
လက်ဆောင် ပေးချင်စိတ်က တားမရ…. ဒါမယ့်… ဘယ်သူ့ကို သွား..ပေးရမှန်း မသိလေတော့ …
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ပန်းပိတောက်ပုံလေးပါ ပါရင်ပိုလှသွားမှာဗျာ
ဂျစ်စူ says: အကြွေလွယ်တဲ့ ပန်းကို ကြိုက်ကြတာလဲ စဉ်းစားစရာဘဲနော့ အွီးပေါက်
Foolish Girl says: လူတွေကပိတောက်တွေသစ္စာမရှိဘူး မရှိဘူးပြောကြတယ်
ရာသီဥတုဖောက်ပြန်အောင်လုပ်နေတဲ့ လူတွေကျတော့သစ္စာသမားတွေလိုလို ……
kai says: ရန်ကုန်ရောက်တော့…
နောက်မနက်ကျ.. ပန်းပိတောက်တို့.. ရွှေဝါတောက်လို့..။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: 22-5-2016 နေ့မိုးတွေရွာပြီး
အောင် မိုးသူ says: ခုပွင့်ပြီလေ